Wararkii ugu dambeeyay magacaabista golaha wasiirada iyo caqabadaha weli hortaagan (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay magacaabista golaha wasiirada iyo caqabadaha weli hortaagan (AKHRISO)
Waxaa maalmihii ugu dambeysay si xowli ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uga socdo ololaha dhismaha xukuumadda cusub ee Soomaaliya iyo magacaabidda golaha wasiirada ee dhawaan lasoo magacaabi doonno.
Ololahaan ka socdo magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inay ku lug leeyihiin xildhibaano, siyaasiyiin iyo odayaal beeleed, kadib markii la guda galay awood qeybsiga beelaha ee golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah beelaha waaweyn ayaa haatan dalbanaya in wasiirada muhiimka ah la siiyo iyadoo mid waliba ay shirar kula jirto madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaane tartanka wasaaradda waaweyn barbar socda loolan kale oo u dhaxeeya shaqsiyaadka doonaya xilalka golaha wasiirada cusub.
Dhinaca kale, shirarka la xiriira ololaha golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya oo aan kala go’ lahayn ayaa la sheegayaa inay socdaan oo kaliya xilliyadii habeenka, waxayna madaxtooyada Soomaaliya noqotay mid aan habeenkii laga seexan.
Caqabadaha ugu waaweyn ee horyaalla ra’iisul wasaaraha iyo madaxweynaha:-
Si kastaba ha ahaatee, lama oga sida ay arrinkaan kusoo dhamaan doonto, waxaana ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre laga sugayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan kahor bishaan 30-keeda inuu kusoo magacaabo golaha wasiirada cusub ee ka mid noqonaya xukuumadiisa cusub ee Soomaaliya.